Njikwa njirimara ngwaahịa na usoro mmepụta bụ iji hụ na usoro mmepụta ahụ dị na steeti a na-achịkwa, na iji nyochaa, nyochaa na nyochaa teknụzụ ọrụ na usoro mmepụta nke a nakweere na mmepụta, ntinye na usoro ọrụ nke na-emetụta àgwà ngwaahịa ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè.A na-akwadokarị ya site na usoro ndị a:
Ngwa njikwa na mmezi
Mee ndokwa kwekọrọ na ngwaọrụ akụrụngwa, ngwa nha, wdg nke na-emetụta njirimara ngwaahịa ngwaahịa, wee chọpụta izi ezi ha tupu ejiri ya, wee chekwaa ma dokwaa ha nke ọma n'etiti ojiji abụọ.Nchedo, na nkwenye mgbe niile na nhazigharị;mepụta atụmatụ nlekọta akụrụngwa mgbochi iji hụ na izi ezi na ikike mmepụta nke akụrụngwa iji hụ na ike usoro na-aga n'ihu;
Ụdị, ọnụ ọgụgụ na ihe ndị a chọrọ na ihe ndị a chọrọ n'ime usoro mmepụta ihe na-emepụta ihe ndị kwekọrọ na ya iji jide n'aka na àgwà nke usoro ihe omume ruru eru, ma nọgide na-arụ ọrụ na mma nke ngwaahịa na usoro;kwupụta ihe ndị dị na usoro ahụ iji hụ na traceability nke njirimara ihe na nkwenye ọnọdụ;
Akwụkwọ dị irè
Gbaa mbọ hụ na ntuziaka ọrụ yana ụdị nyocha nke ngwaahịa ọ bụla ziri ezi;
Usoro mmepụta nke ikpe ahụ dị mkpa, na ihe ndị na-emepụta ihe, ihe ndị na-achọpụta ihe, ihe ndozi, oche ọrụ, ígwè ọrụ na ngwá ọrụ na-ejikọta ya nke ọma site na mmepụta ikpe.Na echichi bụ nke ziri ezi, ọ dị ezigbo mkpa iji mepụta uka mmepụta mgbe nnwale mmepụta offline ngwaahịa na-kweere na-ruru eru, na ikpe mmepụta offline ngwaahịa enweghị ike agwakọta n'ime ukara ngwaahịa!
Nyocha ndị nche
Na-eme nleba anya patrol na usoro isi n'oge usoro mmepụta, na nlele nlele dịka ihe nyocha dị mma si dị iji hụ na paramita dị na usoro ahụ na-edobe nkesa nkịtị.Ọ bụrụ na enwere mgbanwe site na nkwụsị siri ike, nọgide na-emepụta ma na-abawanye mgbalị nyocha;
njikwa ọkwa ogo
Kanye akara n'ọnọdụ nyocha nke ngwaahịa emechara na usoro (mpụpụ), kewaa ngwaahịa ndị akwadoghị, ndị ruru eru ma ọ bụ erughị eru site na akara (akwụkwọ ikike), ma nyefee akara ahụ iji chọpụta na nyochaa ọrụ ahụ;
Mwepu nke ngwaahịa ndị na-adịghị mma
Hazie ma mejuputa usoro njikwa ngwaahịa na-adịghị mma, chọta ngwaahịa na-adịghị mma n'oge, chọpụta nke ọma ma chekwaa ngwaahịa ndị na-adịghị mma, na-elekọtakwa usoro ọgwụgwọ nke ngwaahịa ndị na-adịghị mma iji gbochie ndị ahịa ịnata ngwaahịa na-adịghị mma iji na-atụghị anya ya. ngwaahịa na ngwaahịa ndị na-adịghị mma iji zere ụgwọ ndị na-adịghị mkpa na-ebute site na nhazi ngwaahịa ndị na-adịghị mma.